Ny seza misy kodiarana tsara indrindra ho an'ny alika mba hanatsarana ny fivezivezeny | World Dogs
Tena manampy tokoa ny seza alika rough raha mila fanampiana hifindra ny alikanao., na noho ny fahanterana, ny fahasitranana tamin’ny fandidiana na noho ny aretina. Na izany na tsy izany, dia tena manampy tokoa izy ireo, na dia mahatsapa ho very kely aza isika rehefa mividy iray.
Noho izany, Nomaninay ity lahatsoratra ity natokana ho an'ny seza misy kodiarana ho an'ny alika izay hiresaka momba ny modely atolotra indrindra, ary koa ny torohevitra rehefa mividy iray sy ny karazany samihafa. Raha fintinina dia hiezaka ny hamaha ny fisalasalana rehetra azontsika atao isika.
KAJILE Kodiarana manga roa ...
Ortocanis seza misy kodiarana ...
HobeyHove Stroller ho an'ny...
Seza Trolley Trailers ...
Seza misy kodiarana HobeyHove...
1 Ny seza misy kodiarana tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Tena mahazo aina Adjustable seza misy kodiarana
1.2 seza misy kodiarana ho an'ny alika kely
1.3 seza misy kodiarana ho an'ny alika lehibe
1.4 Tariho kitapo
1.5 Fifehezana fijanonana
1.6 seza misy kodiarana efatra
1.7 Adjustable aluminium ramp
2 Alohan'ny hividianana seza misy kodiarana
2.1 Ny soritr'aretina tokony hotandremana
2.2 Fitsidihana ny mpitsabo biby
3 Inona no atao hoe seza misy kodiarana alika?
4 Karazana seza misy kodiarana ho an'ny alika
4.2 Fiara manandratra
5 Torohevitra ho anao sy ny alikanao
5.1 Fidio tsara ny seza
5.2 Omano ny trano ho an'ny seza
5.3 Zaro ny alikanao
6 Aiza no hividianana seza misy kodiarana alika
Ny seza misy kodiarana tsara indrindra ho an'ny alika
Tena mahazo aina Adjustable seza misy kodiarana
Fditt seza misy kodiarana...
Ity seza misy kodiarana ity dia iray amin'ireo mahazo aina indrindra ho an'ny alikanao. Izy io dia vita amin'ny aluminium, izay mahatonga azy io ho maivana, ary misy andian-tady izay ahafahanao manitsy azy mba hahafahan'ny alikanao mihazona tsara ny tongony aoriana. Ny lafy ratsiny dia tsy manana habe io modely io, ka tsy maintsy mandrefy ny halaviran'ny andilana mankany amin'ny andilan'ilay biby ianao, ary koa ny haavony ka hatreo amin'ny kibony, mba hahitana raha ahitsy tsara ny habeny na tsia. Fanampin'izany, misy tady maimaim-poana!
seza misy kodiarana ho an'ny alika kely
Seza misy kodiarana ho an'ny...
Ny zavatra tsikaritra voalohany momba ity seza misy kodiarana ity dia modely natao manokana ho an'ny alika kely hatramin'ny 10 kilao. Ho an'ny ambiny dia vita amin'ny fantsona aluminium tena maivana nefa mahatohitra. Ny kodia aoriana dia azo amboarina amin'ny haavo isan-karazany, ankoatra izany, dia misy mpihazona roa ihany koa ho an'ny tongotra aoriana. Mba hamaranana, dia modely tena tsara tarehy amin'ny volomparasy.
seza misy kodiarana ho an'ny alika lehibe
Ity modely hafa amin'ny seza misy kodiarana ho an'ny alika ity kosa dia mety amin'ny alika lehibe hatramin'ny 30 kilao. Tena mahatohitra izy io, vita amin'ny aluminium ihany koa ary misy tohana roa mahaliana ho an'ny tongotra aoriana miaraka amin'ny antifriction mba hisorohana ny fikorontanana. Ny kodia dia vita amin'ny fingotra, noho izany dia mety tsara ihany koa ny mandeha an-tongotra noho ny fanoherana lehibe.
derYEP Tarika kitapo ...
Ny kitapo Drag dia vokatra tena mahaliana sy mahasosotra indrindra ho an'ny alikanao entina mody ary tsy mihosotra ny ratra na mba hiarovana ny tongotra aoriana amin'ny tany fotsiny. Ny fandidiana dia tena tsotra, satria misy kitapo nylon misy harato mifoka rivotra sy harness mba tsy hianjera rehefa ampiasaina. Ankoatra izany, azonao atao ny misafidy amin'ny habe samihafa izay mifanaraka amin'ny biby fiompinao.
Safidy hafa amin'ny seza misy kodiarana ny harnesses. Tena mitovy amin'ny harness mahazatra izy ireo, fa izy ireo dia misy karazana tantana izay manandratra ny alika ary manampy azy handeha, manamaivana azy amin'ny fihenjanana mahazo azy any an-damosina, noho izany dia soso-kevitra ho an'ireo alika izay tsy very tanteraka ny fivezivezena. amin'ny tongotra aoriana. Ity iray ity dia tonga amin'ny habe roa, M sy L, ary na dia somary sarotra aza ny mitafy dia tena mahazo aina ho azy ireo ary manampy azy ireo betsaka.
seza misy kodiarana efatra
Pssopp seza misy kodiarana...
Modely hafa amin'ny seza misy kodiarana ho an'ny alika, na izany aza, ity dia misy kodiarana efatra. Atolotra ho an'ny biby hatramin'ny 8 kilao izy io, misy tady maromaro azo amboarina mba hampifanaraka azy amin'ny filan'ny alikanao ary vita amin'ny alimo izy io, ka mahatonga azy ho maivana (raha ny marina, milanja roa kilao eo ho eo ny fitaovana).
Adjustable aluminium ramp
Ary miafara amin'ny vokatra iray izahay, Na dia tsy seza misy kodiarana aza, dia zavatra tsy maintsy raisina rehefa mila izany ny alikantsika: ramp. Izy io dia vita amin'ny aluminium ary lamba malefaka sy tsy malama, ankoatra izany, dia azo amboarina amin'ny haavo samihafa izy io mba hanampiana ny alikanao hiakatra tohatra na ny sofa aza.
Alohan'ny hividianana seza misy kodiarana
Mazava ho azy, tsy afaka mividy seza misy kodiarana ny olona raha tsy efa natolotry ny mpitsabo biby aloha, satria tsy soso-kevitra ho an'ny alika salama izy io. Noho izany aloha dia mila manao izay ilainao ianao.
Ny soritr'aretina tokony hotandremana
Voalohany indrindra Misy soritr'aretina maromaro tokony ho fantatrao izay mety manondro fa mety mila fanampiana fanampiny ny alikanao mba hifindra, ohatra:
fandaniam-poana ny equilibrio
Fahasahiranana rehefa MANDEHANA
Milelaka ny tonon-taolana ny tongotra (kitrokely ...)
paralysisa total na ampahany
Mianjera izany mora foana
Manana izany fahasarotana mijoro
Fitsidihana ny mpitsabo biby
Raha tsikaritrareo ny iray amin'ireo soritr'aretina voalaza etsy ambony, dia tonga ny fotoana hitondrana ny biby fiompinay any amin'ny mpitsabo biby. Any no hilazan’izy ireo amintsika ny mety ho vokatry ny tsy fahatomombanana noho ny fizahana ara-batana sy ny fitiliana isan-karazany, izay mety ahitana, anisan’izany ny X-ray sy ny fitsirihana ra, ary inona no azontsika atao momba izany. Anisan'ny azo atao ny manolotra seza misy kodiarana.
Raha tsorina Ny zava-dehibe dia tsy mampiasa seza misy kodiarana isika raha toa ka mbola tsy nanoro izany ny veterinera, iza no hahafantatra tsara ny toetry ny alikantsika ary hahafantatra ny fomba hanoroana antsika ny fomba hamahana azy.
Inona no atao hoe seza misy kodiarana alika?
Araka ny azonao alaina sary an-tsaina, ny seza misy kodiarana ho an'ny alika dia tsy fitaovana vidiana ho an'ny fialamboly, fa mamaly ny filana manokana, rehefa ny tongotry ny biby fiompinao dia tsy afaka na tsy tokony hihetsika. Mety ho noho ny antony maromaro izany:
Amin'ny voalohany, ny alika dia mety manana sasany aretina degenerative amin'ny lamosina izay mahatonga anao ho very fihetsiketsehana amin'ny tongotra aoriana. Mety ho toe-javatra nolovaina mihitsy aza izany ka mahatonga anao hijaly noho ny fahalemen'ny tongotra aoriana. Ny aretina hafa dia mety miteraka izany, ohatra, fivontosana na diabeta.
La taona Mety ho antony iray hafa amin'ny lanjan'ny alika dia mila ny fanampian'ny seza misy kodiarana. Ohatra, mety hiteraka atrophy hozatra, arthritis ...
Farany, mety ilaina ny seza misy kodiarana raha ilaina ny alikanao sitrana avy amin'ny fandidiana sasany ao ambadika.
Karazana seza misy kodiarana ho an'ny alika
Misy karazana seza misy kodiarana ho an'ny alika izay azo ampifanarahana tsara amin'ny filanao, na amin'ny fiheverana fa ho fanampiana maharitra izany na vonjimaika.
Ny seza misy kodiarana mahazatra indrindra dia matetika misy fantsona metaly roa misy kodiarana roa izay apetraka eo amin'ny lamosin'ny alika miaraka amin'ny tady maromaro mba hanesorana ny tongotra aoriana hiala amin'ny tany sy hiarovana ny kodia amin'ny vatan'ny biby. Izy ireo no mahazo aina indrindra raha mandeha an-tongotra. Ankoatra izany, mamela ny alika hanamaivana ny tenany izy ireo, ary mety maharitra 15 minitra ka hatramin'ny adiny iray.
Vahaolana iray hafa, na dia somary sarotra kokoa ho an'ny alika sy ny tompony aza, dia ny fampiakarana harness. Karazan-kitapo misy tànany ireny izay ahafahana mampiakatra ny lamosin'ny alika mba hahafahany mandeha tsara kokoa. Mifanohitra amin'izany kosa, misy karazana harness isan-karazany, arakaraka ny filan'ny alika sy ny habeny.
Farany, ny tows dia mety tsara entina manodidina ny trano, na dia tsy asaina mitondra azy any ivelany aza izy ireo, satria very loto. Izy ireo dia kitapo azo antoka ao amin'ny tsinain'ny biby izay mamela azy hivezivezy amin'ny tongotra aloha ihany, ary miaro ny aoriana amin'ny tany.
Torohevitra ho anao sy ny alikanao
Raha mila mitondra seza misy kodiarana ny alikanao, azo antoka toe-javatra tena vaovao ho antsika roa tonta izany. Izany no antony mety hahasoa an'ity andiana toro-hevitra ity:
Fidio tsara ny seza
Rehefa mifidy ny seza, indrindra raha io no voalohany, diniho ny filan'ny alika. Mety hahasoa, farafaharatsiny amin'ity voalohany ity, ny mandeha any amin'ny magazay ara-batana na ny veterinera izay mahay manoro hevitra antsika amin'ny fomba manokana. Etsy an-danin'izany, dia tena soso-kevitra fa, na dia lafo vidy entana, dia tsy mitsitsy ny fandaniana sy ny mitandrina ny fampiononana ny alika.
Omano ny trano ho an'ny seza
Toy ny amin’ny olona, mila ny trano hipetrahany ny alika mba hifanaraka tanteraka amin'ny toe-javatra misy azy. Noho izany, mety ho hevitra tsara ny fametrahana ramps mba hahafahanao miakatra mora kokoa amin'ny tohatra na eo amin'ny sofa aza. Matetika ianao no mahita ireo entana ireo amin'ny fivarotana manokana sy amin'ny Amazon.
Zaro ny alikanao
Aza manantena fa ho zatra amin'ny seza misy kodiarana mandritra ny alina ilay biby. Toy ny mahazatra, mila mampifanaraka ny fiovana tsikelikely ianao. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mampiofana azy hitondra ny seza, fa koa mba ho zatra hanamaivanana ny tenany rehefa mitafy izany.
Aiza no hividianana seza misy kodiarana alika
Betsaka kokoa ny toerana misy azy afaka mividy iray amin'ireo vokatra ireo isika. Ohatra:
Amazon Isan’ny toerana ahitanao ity karazana vokatra ity. Hahita modely maro samihafa isika, na dia tsy afaka mahita azy ireo mivantana aza ny lafy ratsiny. Ny tsara anefa dia tena tsara ny politikan'ny fiverenany, ka raha tsy maharesy lahatra antsika ny vokatra dia afaka mamerina azy mora foana isika.
En pejin-tranonkala manokana toa an'i TiendaAnimal sy Kiwoko dia ho hitantsika ihany koa ireo karazana vokatra ireo. Amin'ny maha manam-pahaizana manokana kokoa, dia afaka miantehitra amin'ny fanampiana manokana kokoa isika, izay ahafahantsika mahita ny vokatra tadiavintsika amin'ny fomba mora kokoa.
Farany, ary ny tena soso-kevitra raha mahatsiaro ho very kely ianao na mitady vokatra manokana dia ny lay orthopedique ho an'ny biby toy ny Ortocanis. Izy ireo no manana karazany maro, ankoatra ny fananana kalitao tsara.
Ny seza misy kodiarana ho an'ny alika dia tena manampy ho an'ireo biby izay, noho ny taonany na ny aretina, dia sarotra ny mihetsika. Lazao anay, mila ve ny alikanao? Efa nanandrana ny iray amin'ireo vokatra voalaza etsy ambony ireo ve ianao? Nanao ahoana ny traikefanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny seza misy kodiarana tsara indrindra ho an'ny alika hanatsarana ny fivezivezeny